Xildhibaan Saabir Shuuriye: Wasiirka amniga taliyeyaasha Ciida... | Universal Somali TV
Xildhibaan Saabir Shuuriye: Wasiirka amniga taliyeyaasha Ciidamada ma maamulo ee ha iscasilo
Iyadoo muddooyinkii dambe amnidaro ay ka jirtay Magaalada Muqdisho oo Xildhibaanada Siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen amnidaradaasi, ayaa Xildhibaan Saabir Shuuriye oo ka tirsan Golaha Shacabka wuxuu ku eedeeyay Wasiirka amniga Somaliya inuusan jirin Taliyeyaal uu maamulo.
Xildhibaanka oo ka hadlaayay Xarunta Golaha Shacabka Somaliya, ayaa sheegay Wasiirka Amniga inuu meesha u joogo magac u yeel kaliya, balse uusan qabsan shaqooyinka uu masuulka ka yahay.
Wuxuu sheegay Taliyeyaasha Ciidamada dhamaan inay si toos ah u hoostagaan Ra’iisul Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre oo sida uu yiri Maamula Ciidanka.
Wasiir Islow ayuu ugu baaqay inuu iscasilo, haddii uusan maamuli Karin Ciidanka, kana soo bixi Karin Shaqooyinka loo igmaday.
“Wasiir amni oo Wasiir amni iska ah oo wax uu xukumo uusan jirin oo Taliye ka amar qaata uusan jirin Saaxiibkey Ducaalle, aad ayaan uga xumahay inuusan u madax banaaneyn shaqadiisa, Wasiirka waxaa la habooneyd haddii uusan shaqadiisa u madax banaaneyn run ahaantii inuu mar hore isaga tago ayaa fiicnayd.” Ayuu yiri Xildhibaan Saabir Shuuriye.
Wasiirka Amniga Somaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaalle ayaa muddooyinkii dambe lagu eedeynaayay inuu masuul ka yahay fashilka amnidaro ee ka jira Magaalada Muqdisho oo Hay’addaha ammaanka dowladda ay wax ka qaban waayeen.
Kan-xigaTaliyaha Booliska Puntland oo Koontar...
Kan-horeMasuuliyiinta amniga oo maanta Golaha...
46,614,222 unique visits